Iindaba - Ukuqokelela kunye nokuthuthwa kwerhasi ye-oilfield
Ukuqokelela kunye nokuthuthwa kwerhasi ye-oilfield
Irhasi yommandla we-oyile (okt irhasi ekrwada enxulumene ne-oli ekrwada) ukuqokelela kunye nenkqubo yothutho yobunjineli ngokubanzi ibandakanya: ukuqokelelwa kwerhasi, ukusetyenzwa kwerhasi; Ukuthuthwa kwerhasi eyomileyo kunye ne-hydrocarbon ekhanyayo; Ukuthuthwa okutywiniweyo kwe-oyile ekrwada, ukuzinza kwe-oyile ekrwada, ukugcinwa kwe-hydrocarbon ekhanyayo, njl.
Ukuqokelelwa kwerhasi kwintsimi ye-oyile
Emva kokuba i-oyile ekrwada iphuma kumthombo we-oyile kwaye ilinganiswa ne-metering separator, i-oyile kunye negesi zithunyelwa kwi-oyile kunye ne-gas separator yesikhululo sokuhambisa i-oyile. Irhasi ye-Oilfield yahlulwe kwi-oyile ekrwada kwaye ingena kumnatha wokuqokelela igesi. Ngokubanzi, ukuzicinezela okanye isikhululo sokuqokelela irhasi yakhiwe kwisikhululo esidityanisiweyo seplanti yokuvelisa ioyile. Iicompressor ze-Booster ubukhulu becala ziiyunithi ezininzi ezinenqanaba elinye eziphindaphindayo. Uxinzelelo lwe-inlet luyakwazi ukudada, kwaye uxinzelelo lwe-outlet luxhomekeke kwi-system back pressure. Uxinzelelo oluphezulu lwe-outlet yi-0.4MPa.
Kuvaliwe ukuqokelelwa kunye nokuthuthwa kwe-oyile ekrwada
Ukuqokelela okuvaliweyo kunye nokuthuthwa kwe-oyile ekrwada yeyona meko iphambili yokutsala i-hydrocarbon ekrwada kwi-oyile ekrwada ngendlela yozinziso lwe-oyile ekrwada, kwaye ikwayenye yamanyathelo abalulekileyo okunciphisa ilahleko ye-oyile ekrwada.
Kwisikhululo sokuhambisa i-oyile, i-oyile ekrwada idlula kwisahluli se-oyile-yerhasi ingena kwindawo yokuhluba amanzi simahla, ize emva koko ithunyelwe kwisikhululo sokuphelisa i-oyile ekrwada ngetanki egcina amanzi kunye neziko lokufudumeza ngaphandle. Apha, i-oyile ekrwada idlula kwi-remover yamanzi yasimahla, ize ingene kwi-dehydration furnace yokufudumeza, ize ingene kwi-composite electric dehydrator. Emva kokuphelelwa ngamanzi emzimbeni, i-oyile ekrwada ingena kwitanki ye-buffer (umthamo wamanzi we-oyile ekrwada ungaphantsi kwe-0.5%), ize iphoswe kwiyunithi yozinziso lwe-oyile ekrwada, kwaye emva kokuzinziswa, i-oyile ekrwada ingena kwitanki yokugcina ukuze ithunyelwe ngaphandle.
Kwinkqubo evaliweyo yesikhululo sokuhambisa i-oyile kunye nesikhululo sokumisa amanzi, amanzi asimahla akhutshwa kwangaphambili kwaye axutywe kwindawo yokutofa i-oyile kwindawo yokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla okuvelisa.
Ukulungiswa kwerhasi ye-oilfield
Irhasi ye-oilfield evela kwisikhululo soxinzelelo lwe-self-pressure ingena kwiyunithi yokupholisa enzulu (okanye i-cryogenic), apho igxininiswe, iqhwa kwaye ihlulwe kunye ne-non-condensable gas ukusuka kwiyunithi yokuzinzisa i-oyile ekrwada ukubuyisela amacandelo angaphezulu kwe-C3 (okanye i-C2) , kwaye igesi eyomileyo ithunyelwa ngaphandle.
Ukuqokelelwa kwehydrocarbon ukukhanya kunye nenkqubo yothutho
Ukuqokelelwa kwe-hydrocarbon ukukhanya kunye nokuthuthwa kwamkela indlela yothutho lwemibhobho, kwaye inkqubo iqulunqwe yindawo yokugcina encedisayo, isikhululo sokudlulisa, ukugcinwa ngokubanzi, isikhululo sokulinganisa iimitha ngaphandle kunye nothungelwano lombhobho ohambelanayo.
I iyunithi yokubuyisela i-hydrocarbon ekhanyayoixhotyiswe ngetanki yokugcina, esetyenziselwa ukuhlaliswa kwamanzi emzimbeni, ulungelelwaniso lwemveliso, isithinteli sempompo yokuthumela ngaphandle kunye nombhobho wokuthumela ngaphandle ukuqinisekisa imveliso eqhelekileyo okanye ukuvalwa okucwangcisiweyo kweyunithi xa kunokwenzeka ingozi. Umthamo wokugcina itanki yokugcina ngokuqhelekileyo yi-1 ukuya kwiintsuku ze-2 zokuvelisa ukukhanya kwe-hydrocarbon.
Umsebenzi ophambili wendawo yokugcina i-hydrocarbon ekhanyayo kukusebenzisa indawo yokugcina ukulungelelanisa ukungalingani phakathi kwemveliso ye-hydrocarbon ekhanyayo kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe ngosuku olunye, kunye nokugcina kunye nokucoca ukukhutshwa kwemibhobho kwimeko yengozi yombhobho.
Umsebenzi oyintloko wokugcinwa kwe-hydrocarbon yokukhanya ngokubanzi kukusebenzisa itanki yokugcina ukulungelelanisa ukungalingani phakathi kwemveliso ye-hydrocarbon yokukhanya kunye nokuthumela ngaphandle, kubandakanywa ukuguquguquka kwemveliso yeyunithi yokuvelisa, ukuguquguquka kwemveliso okubangelwa ngamaxesha ahlukeneyo okugcinwa kweyunithi, isityalo se-ethylene. ukugcinwa ngaphandle kokugcinwa kwe-ammonia, kunye nentsimi yeoli kufuneka iqhubeke nokubonelela ngokugcinwa kwe-hydrocarbon ekhanyayo efunyenwe kwigesi yokutya.
Ukugcinwa ngokubanzi kwe-hydrocarbon ekhanyayo kunye nesikhululo sokulinganisa iimitha ezithunyelwa ngaphandle zezona ndawo ziphambili zolwelo lwe-hydrocarbon yemathiriyeli ekrwada ebonelelwe yintsimi yeoli yesityalo se-ethylene, indawo yokuhlangana ye-hydrocarbon ekhanyayo eveliswa ziiyunithi ezahlukeneyo zokukhanya kwe-hydrocarbon, kunye ne-hub yokugcina ukukhanya kwe-hydrocarbon kunye nenkqubo yokuthutha. .
Inkqubo yokuthumela ngaphandle kunye nokubuyisela igesi eyomileyo
Irhasi yentsimi yeoli iphathwa kwaye iqhutywe emva kokubuyisela. Uninzi lwerhasi eyomileyo emva kokubuyiswa kwe-hydrocarbon ekhanyayo ithunyelwa kwi-Dahua kunye nezityalo ze-methanol njengezinto eziphathekayo zekhemikhali, kwaye inxalenye yerhasi eyomileyo ibuyiselwa kwisikhululo sokuhambisa ioli kwintsimi yeoli njengamafutha okufudumeza isithando somlilo kunye nebhoyili. Ukubuyiswa kwerhasi eyomileyo yinkqubo engasemva yokuqokelelwa kwerhasi. Ngelo xesha, enye igesi eyomileyo ifakwe kwindawo yokugcina igesi ehlotyeni. Iveliswa ebusika ukunciphisa ukunqongophala kwegesi yendalo kunye nemfuno.
Enye irhasi eyomileyo isetyenziselwa ukuvelisa umbane nerhasi kubahlali.
Ixesha lokuposa: Jun-21-2021
Imilinganiselo yobugcisa ye-150KW iseti yejeneretha yegesi
Imveliso ye-Hydrogen kunye negesi yendalo kunye nenkqubo yayo